Abakhiqizi nabahlinzeki base-US / 32A (7.6KW) Ifektri yaseChina US / 32A (7.6KW)
Isiteshi sokushaja se-AC EV
I-US / 16A (3.6KW)
I-US / 32A (7.6KW)
I-US / 40A (9.6KW)
I-US / 48A (11.5KW)
I-CE / 7KW
I-CE / 22KW
I-CE / 2 × 22KW
Isiteshi sokushaja i-DC esheshayo
I-CE / 20KW
I-CE / 60KW
I-CE / 120KW
OCPP kagesi wezohwebo 1 ....
I-Ac 2 * 22kw 64A EV Electric ...
16A 32A 40A 48A Amandla Amasha ...
I-EV Ishaja Yesiteshi Wall-Mo ...
Khiqiza US ejwayelekile EV ...
Thayipha i-1 Level 2 Wall-Mounted EV Car Charger Wallbox ngokuvunywa kwe-ETL
Ifektri ngqo e-China EV Charging Point, i-EV Ukushaja Ingqalasizinda, Ngenhloso ye- "zero defect". Ukunakekela imvelo, nembuyiselo yezenhlalo, ukunakekela umthwalo wemfanelo wabasebenzi njengomsebenzi wakho. Samukela abangani abavela emhlabeni wonke ukuthi basivakashele futhi basiqondise ukuze sikwazi ukufeza umgomo wokuwina ndawonye. Umsebenzi wethu ukuthuthukisa imikhiqizo yokudala kumakhasimende anolwazi oluhle lwe-OEM / ODM Manufacturer China EV Ishaja.
Nikeza Iziteshi Zokushaja Izimoto Zikagesi ze-OEM Ngezitifiketi ze-ETL
Isiteshi Sokushaja Izimoto ze-OEM e-China, Ukushaja Okusheshayo, Silwela ukwenza kahle, ukuthuthuka okungapheli kanye nezinto ezintsha, sizibophezele ukusenza "abathembeli bamakhasimende" kanye "nabaphakeli bokuqala bezinsimbi zomkhiqizo wezinsiza zomkhiqizo" abahlinzeki. Khetha thina, wabelana ngesimo sokuwina!
Ishaja ye-ETL 7.6kw AC EV ene-Ocpp1.6J nohlobo lwe-Plug 1
Ishaja ye-Good Quality China EV, Ishaja Yemoto, Ngensizakalo ephakeme futhi ehlukile, sithuthukiswe kahle kanye namakhasimende ethu. Sisebenzisa uhlelo oluphelele lokuphatha ikhwalithi yesayensi, ikhwalithi enhle kakhulu kanye nokholo oluphakeme, sizuza ukuma okuhle futhi sithathe lesi siyalo seGood Quality China 32A Type1 SAE J1772 EV Ishaja. Ubungoti nokwazi kuqinisekisa ukuthi besilokhu sikujabulela ukwethenjwa okuvela kumakhasimende ethu emisebenzini yethu yebhizinisi. "Ikhwalithi", "ukwethembeka" kanye "nensizakalo" kungumgomo wethu. Ukwethembeka kwethu nokuzibophezela kwethu kuhlala kuhloniphekile enkonzweni yakho. Xhumana Nathi Namuhla Ngeminye imininingwane, xhumana nathi manje.
Ukushaja kwe-AC US / 32A (7.6KW)
Thola ukuthi imikhiqizo emisha evela ngokuhlanganyela ingazuzisa kanjani ekhaya, emsebenzini, nakwezinye izindawo zomphakathi. Ukushaja okunokwethenjelwa kuphelele kuyo yonke i-EV. Kusetshenziswa ipulagi ye-J1772 yendawo yonke amashaja ezimoto kagesi asebenza ngayo yonke i-EV ne-Plug-In Hybrid e-United States naseCanada. Kubandakanya amamodeli athandwayo afana no, Chevy Bolt, Nissan Leaf, Ford Fusion, BMW i3, Chevy Volt, Toyota Prius, Chevy Spark, Jaguar I-Pace ne-Audi e-tron. Ngisho neTesla isebenzisa i-adaptha yayo ejwayelekile.
Noma yimuphi umbuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma pricelist, sicela uthumele i-imeyili kithi. Sizothintana nawe kungakapheli amahora angama-24.
Ikheli:No. 268 Houxiang Rd, Xinyang Industrial, Haicang District, Xiamen, China 361028
Umakhala ekhukhwini:+86 13656008035